अन्तरराष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माण हुँदै
3rd November, 2020 Tue १५:३४:०१ मा प्रकाशित
राँझा । गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–६ अमरपुरस्थित बुल्ममा शहीद लखन थापाको नामबाट फुटवल रङ्गशालाको निर्माण शुरु भएको छ ।
गत वर्ष सामान्य रुपमा काम भएतापनि यस वर्षबाट भने रङ्गशाला निर्माणको काम तीव्र गतिमा भइरहेको हो । ‘शहीद लखन थापा स्मृति रङ्गशालामा’ मा अहिलेसम्म पर्खाल लगाउने, फुटवल ग्राउण्ड तयार गर्ने र दुवो रोप्नेलगायत काम भएका छन् । राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्मार्फत रङ्गशालाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उपभोक्तामार्फत रु. १८ लाख र आव २०७५/०७६ मा रु. दुई करोड ८० लाख खर्च भएको छ ।
दोस्रो चरणमा आवश्यक भौतिक संरचनाको कामका लागि राष्ट्रिय खेलकूद परिषद्ले वोलपत्र आह्वान गरिसकेको जिल्ला खेलकूद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख डिल्ली विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । खेल मैदानमा रोपिएको दुवोलाई सिँचाइको लागि चार किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याइएको छ । कूल १०५ मिटर लम्वाई र ६८ मिटर चौडाई रहेको सो फुटबल मैदान १५ हजार दर्शक अटाउने क्षमताको छ । सो रङ्गशालालाई मदन भण्डारी राजमार्गले छोएको छ ।
रङ्गशाला नजिकै विपन्न तथा कुमाल बस्ती, इस्मा गाउँपालिकाको सेरामिक्स र धुर्कोट गाउँपालिकाको वस्तुस्थित विचित्र गुफा छन् । गाउँमै अन्तरराष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासीमा उत्साह देखिएका छन् । “रङ्गशाला निर्माण भएपछि यहाँ आर्थिक विकासका थुप्रै ढोका खुल्नेछन्”, स्थानीयवासी बोमलाल भण्डारीले भने, “सकेसम्म छिटै निर्माण सम्पन्न भए हुन्थ्यो ।”